Thursday November 25, 2021 - 12:20:43
Caabuqa Covid19 ayaa wali halaag ba'an ka geysanaya wadanka Jarmalka oo kamid ah dalalka qaaradda Yurub.
Tirakoob argagax ku beeray malaayiin qof reergalbeedka ayaa xalay kasoo baxay dowladda Jarmalka wuxuuna tirakoobkan banaanka soo dhigayaa halista uu Corona Virus ugeystay bulshada wadankaasi ku dhaqan.
Machadka Robert Koch ee rasmiga ah ayaa warbixin cusub ku sheegay in dad ka badan 100,000 oo ruux ay Jarmalka ugu dhinteen Covid19 halka malaayiin kale uu soo ritay.
Shalay oo kaliya ayuu Corona asiibay illaa 70,000 oo ruux waana tiradii ugu dabneed oo maalin qura gudaha Jarmalka Covid19 looga diiwaan geliyo.
Wasaaradda caafimadka xukuumadda Berlin ayaa ugu baaqday dadweynaha in ay u hoggaansamaan awaamirta caafimaad ee dalbanaysa in lakala fogaado.
Wadamada qaaradda Yurub ee Corona uu halista ba'an ku hayo ayaa kala aha Ingiriiska,Talyaaniga,Faransiiska,Spain iyo Jarmalka, waa khasaarihii ugu badnaa ee heer yurub kasoo gaaray cudur safmar ah tan iyo wixii ka dambeeyay daacuunkii madoobaa oo Yurub ku dilay boqolaal malyan oo qof